कञ्चनपुरका विद्यालयमा अझै पुगेनन् पाठ्यपुस्तक – Jana Awaaj
Nepalease News Portall site
Breaking • शिक्षा-स्वास्थ्य • समाचार • स्थानीय खबर
कञ्चनपुरका विद्यालयमा अझै पुगेनन् पाठ्यपुस्तक
Written by janaawaaj
शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा अझै पनि कञ्चनपुरका सामुदायिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीका हातमा पा्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन । पाठ्यपुस्तक नपुगेपछि पठनपाठनमा समस्या हुने गरेको छ । “केही कक्षामा विद्यार्थीलाई पुराना पुस्तक दिएर काम चलाउँदै आएका छौँ”, शुक्लाफाँटा नगरपालिका– ६ मा रहेको बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक प्रकाश उप्रेतीले भन्नुभयो,“पाठ्यपुस्तक फेरिएका कक्षामा पठनपाठन गराउन कठिन भएको छ ।”
किताबी कुरा सिकाउन नपाएको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यावहारिक कुरा विद्यार्थीलाई सिकाइने गरेको बताउनुभयो ।“पाठ्यपुस्तक छैनन् । कक्षा कोठामा त्यतिकै बस्नु भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “कहिले विद्यार्थीलाई निबन्ध, निवेदन, चिठ्ठी पत्र लेख्ने तरिका सिकाउने गरेका छौँ ।” कक्षा ४, ७ र ९ को कोर्सनै परिवर्तन भएको छ । ती कक्षाका विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने भन्ने पिरलो बढी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
शुक्लाफाँटाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा अझै नयाँ पाठ्यपुस्तक पुगेका छैनन् । सुगमको क्षेत्र भए पनि पाठ्यपुस्तक नपुग्नु बिडम्बनानै भएको पूर्व शिक्षक शेरबहादुर भण्डारी बताउनुहुन्छ । “पाठयपुस्तक समयमै नपुगे विद्यार्थीले कसरी पढन सक्छन् । विद्यालयमा पढाएको कुरालाई घरमा दोहो¥याउनका लागि पाठ्यपुस्तकनै चाहिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहले पनि दायित्व वहन गर्नुपर्छ । त्यसो गरेको देखिदैँन ।”
पुनर्वास नगरपालिका– ११ मा रहेको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय अमरबस्तीका शिक्षक विजय उपाध्याय विद्यालयमा पढने ६० प्रतिशत जति विद्यार्थीले मात्रै नयाँ पाठ्यपुस्तक पाएको बताउनुहुन्छ । “विद्यार्थीको सङ्ख्या अनुसारको पाठ्यपुस्तक माग गरेकै छौंँ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड धनगढीले पाठपुस्तकनै पु¥याउन सकिरहेको छैन । पाठ्यपुस्तक पाएका विद्यार्थीले समेत पूरै सेट पुस्तक पाएका छैनन् । एक दुई पुस्तकको अभावनै रहेको छ ।”
पाठ्यपुस्तक नपुगेका केही विद्यालयका शिक्षकले इन्टरनेटबाट पाठ्यपुस्तक डाउनलोड गरी पढाउनसमेत थालेका छन् । यसरी पढाउने शिक्षकको सङख्या भने थोरै छ । कक्षा कोठामा यसरी पढाएका विषय वस्तुलाई विद्यार्थीले घरमा पाठ्यपुस्तकै अभावमा दोहो¥याएर पढ्न पाउने गरेका छैनन् । जसबाट विद्यार्थीको पठनपाठनको कार्यमा अवरोध हुन थालेको छ । “शिक्षकले विद्यालयमा मौखिक रुपमा पढाएका विषय घर आउँदासम्म बिर्सीसकेका हुन्छौँ”, कक्षा ९ मा पढदै आएका विद्यार्थी अजय चौधरीले भन्नुभयो, “पाठ्यपुस्तक भए पढन सजिलो हुन्थ्यो पाउन सकेका छैनौँं । कहिले पाइने हो पत्तो छैन ।”
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड धनगढीका प्रमुख ध्रुव पन्त भने सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लाका ७० देखि ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको दाबी गर्नुहुन्छ । “कुनै कुनै कक्षाको पूरै सेट पुग्न सकेको छैन” उहाँले भन्नुभयो, “अर्को हप्ताभित्रै अपुग भएका किताबसमेत आइपुग्छन् । पाठ्यपुस्तकनै नपुगेका विद्यालयमासमेत छिटो भन्दा छिटो कसरी पाठ्यपुस्तक पुगाउन सकिन्छ । त्यसका लागि काम अगाडि बढाएका छौंँ ।”
अपुग भएका २० हजार पुस्तक माग गरेको उहाँले बताउनुभयो । “काठमाडौँबाट पुस्तक ल्याउनुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाढी पहिरोका कारण सडक ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध हुँदा पाठ्यपुस्तक पुग्न ढिलाइ हुन गएको छ । बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध सडक चलिसकेकाले चाँडै अपुग पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा पुग्छन् ।”
बाटो परिवर्तन गरेका ‘रोलमोडल’ किसान
भुटानसम्बन्धी पुस्तक बजारमा
Breaking • विज्ञापन-सम्पार्क • समाचार
रातको समयमा पनि खानेपानीको काम !
Breaking • मौसम • समाचार
बाढीपहिराले २१ घर उच्च जोखिममा
Breaking • बजार
आलेखः खेर गएको प्लास्टिकबाटै उत्पादन हुन्छ इन्धन
Breaking • बजार • समाचार
Breaking • कृषि • समाचार
खेत बगरमा परिणत भएपछि
Breaking • शिक्षा-स्वास्थ्य • समाचार
सेवा बिस्तार हुँदा बिरामीलाई सहज
अध्यक्ष : अमित ब्रहमशाखा
सम्पर्क : ९८५११२५५४६
इमेल : janaawaj77@gmail.om
Reg : 2156/077.78
Copyright © 2022. Created by NamasteHost. Powered by Jana Awaaj.